Vaovao - Fankalazana Krismasy mendrika miaraka amin'ireo mpiasa sy mpanjifanay
Fankalazana Krismasy mendrika miaraka amin'ireo mpiasa sy mpanjifanay
Ny fankalazana ny Fetin'ny Krismasy 2020 dia fotoana lehibe sy niavaka iray nofenoina fifaliana sy hafanam-po goavambe ho an'ireo mpiasa ao amin'ny orinasanay rehetra.
Ny Fetibe Krismasy, izay ankalazaina erak'izao tontolo izao, dia vanim-potoana maneho ny fahalalahan-tanana, ny fitiavana ary ny hatsaram-panahy amin'ireo olon-tiantsika, namana, mpiara-miasa ary mpiara-monina amintsika, ary koa nanokana fotoana hiarahan'ny mpianakavy hivory. .
Ho anay ao amin'ny Suzhou Springchem International Co., Ltd., ny firavoravoana sy ny fankalazana ny Krismasy dia naseho tamin'ny mpiasanay sy ny mpanjifanay rehetra.
Ary toy ny iray amin'ireo mpamokatra lohan'ny fungicides simika isan'andro sy zavatra simika tsara hafa; misaotra an'ireo mpiasanay tsy niasa sy niasa mafy, ny orinasa dia nanolotra ny fahalalahan-tànana ho an'ireo mpiasa niaraka tamin'ny parcels sy loka maro momba ny fifanampiana.
Mba hiantohana sy hankafizan'ny mpiasa anay ny fetin'ny Krismasy miaraka amin'ny olon-tiany amin'ny fomba faran'izay kanto, ny orinasa dia nizara tamim-pahatsorana ireo fanomezana feno fonosana ho an'ny mpiasa tsirairay ao amin'ilay orinasa.
Mihoatra noho ny habetsaky ny fanomezana fonosana nozaraina ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasanay, nikarakara fifaliana tamin'ny faran'ny taona ihany koa izahay izay nanolorana mari-pankasitrahana sy fandrisihana ho an'ny sokajy mpiasa marobe ao amin'ny orinasa, mifototra amin'ny tahan'ny asany.
Tahaka ny fanaontsika amin'ny maha-mpanamboatra fatratra ny chloroxylenolary akora simika tsara tarehy hafa, ny hetsiky ny fiaharan'ny orinasa ho an'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa dia fomba iray hampitana ny fahafinaretan'ny orinasa sy ny fifaliana manoloana ny fandavan-tena sy ny fahazotoan'ny mpiasa nandritra ny taona maro.
Ho fanampin'izany, ity hetsika hatsaram-panahy, fizarana ary fitiavana ity, nataon'ny orinasa dia nahatonga ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa hampitombo ny fahazotoany sy ny vokatra vokariny amin'ny hafa mba hitazomana ny toeran'ny orinasa ho iray amin'ireo mpamokatra fungicide simika lehibe indrindra.
Ny fihetsiky ny mpiasa manoloana ny fahalalahan-tanana sy ny fihetsika feno hatsaram-panahy nataon'ny mpitantana ny orinasa dia fanehoana fientanam-po tanteraka tamin'ny fampisehoana sy ny fanehoana ny fitiavana nasehonay azy ireo, izay nankafizin'izy rehetra.
Ankoatr'izay, ny lohan'ny departemanta tsirairay ao amin'ny fikambanana dia nivoady ny hanome ny tsara indrindra miaraka amin'ny ekipany amin'ny fananganana ny fenitry ny orinasa izay iray amin'ireo mpamono fungika simika sy mpamokatra simika tena tsara.
Toy izany koa, ireo mpiasa dia nanome toky ihany koa ny orinasa fa hanohy ny asa mafy ataon'izy ireo izy ireo mba hahazoana antoka fa ny lazan'ny orinasa iraisam-pirenena ho iray amin'ireo mpamokatra fungicide simika tsara indrindra sy akora simika tsara dia voatazona amin'ny alàlan'ny fanoloran-tenany amin'ny andraikiny.
Nahomby ny fankalazana ny Noely tao amin'ny orinasanay satria faly ny rehetra rehefa nody izy ireo niaraka tamin'ny fonosana fanomezana fanasoavana maro ho an'ny fankalazana ny Noely.
Miaraha miasa aminao amin'ny fungicida simika faran'izay tsara
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpamokatra mpamokatra fungicides simika simika sy zavatra simika hafa tsara toa ny chloroxylenol, afaka matoky anay ianao amin'ny filanao simika rehetra.
Ianao dia afaka Mifandraisa aminayanio ho an'ny fungicida simika faran'izay tsara kalitao, ary faly ianao fa nandany vola tamin'ny vokatra tsara indrindra.